Mas’uuliyiin ka tirsan PDP oo deeq lacageed gaarsiiyay Carruur isku dhegan”SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Mas’uuliyiin ka tirsan PDP oo deeq lacageed gaarsiiyay Carruur isku dhegan”SAWIRRO”
Mas’uuliyiinta katirsan xisbiga Nabada iyo Horumarka ee P D P ayaa maanta deeg lacageed gaarsiiyay waalidiinta dhalay carruur dhashay ayagoo isku dhegan oo horay looga keenay deegaano ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe si wax looga qabto xaalada caafimaadka.
Carruurta ayaa isaga dhegan qeybaha dambe ee jirka iyadoo dhanka kale mas’uuliyiinta Xisbiga Nabada iyo Horumarka P D P ay balan qaadeen in ay ka qeyb qaadan doonaan sidii caafimaad dibada ah looga qaadi lahaa caruurtaasi.
Xoghayaha guud Xisbiga Nabada iyo Horumarka P D P Xamza Cabdi Barre oo ka hadlay goobta ayaa sheegay in ka dam qadeen xaaladda carruurtan Soomaaliyeed isla markaana ay soo gaarsiiyeen deeq lacageed oo dhan $ 600.
Ibrahim Xasan Tooxow oo Adeer u ah carruurtaasi ayaa gudoomay deeqdaasi lacagta ah isagoona ka mahadceliyay deeqda lacageed ee Xisbiga Nabada iyo Horumarka ay soo gaarsiiyeen.
Hooyadan dhashay carruurtan isku dhegan ayaa 11-ka bishan Maarso la keenay Isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho oo xaaladdooda caafimaad lagu baxnaaniyay ayagoo laga keenay Tuulada Cadcadey oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe.
Sawir Qaade: Muuse Cismaan Abtow
SIMAD: Macallimiin PhD iyo Master dibadda ku soo diyaariyay oo la soo dhaweeyay-SAWIRRO